शाकाहारीलाई कोरोना नलाग्ने हल्ला कति वास्तविक ? यस्तो छ तथ्य | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more शाकाहारीलाई कोरोना नलाग्ने हल्ला कति वास्तविक ? यस्तो छ तथ्य
जेठ १ गते, २०७७ - १४:२३
कोरोना विषेश, मुख्य समाचार, सन्जाल बहस
काठमाडौं । पछिल्लो समय केहि सामाजिक सञ्जाल तथा केहि सञ्चार माध्यममा अनौठो कुरा भाईरल बन्यो, जसमा शाकाहारी मानिसलाई कोरोना नलाग्ने उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)लाई आधार बनाउँदै प्रचार गरिएको उक्त कुरा मुख्यतः भारतीय सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा भाइरल बनिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट आएको अनि केहि सञ्चार माध्यमबाट प्रचार गरिएको उक्त कुरामा हालसम्म विश्वभर कुनैपनि शाकाहारी मानिसलाई कोरोना संक्रमण नभएको दाबी गरिएको छ ।
सनातनीक हिन्दु संस्कृति सबैभन्दा राम्रो भएको र सनातनीक संस्कृतिलाई मान्ने शाकाहारीमा कोरोना संक्रमण नभएको बताइएको छ । भाइरल बनेको उक्त कुरालाई विभिन्न हिन्दु संगठनहरुले पनि प्रचार गरिरहेका छन् ।
डब्ल्यूएचओलाई आधार देखाउँदै प्रचार गरिएको उक्त कुरामा खोज गर्दा डब्ल्यूएचओले कुनै पनि ठाउँमा यसबारे कुनै तथ्य प्रस्तुत नगरेको भेटिएको छ । डब्ल्यूएचओका भारतीय प्रतिनिधि सुप्रिया बेजबरुआले चर्चा आएको कुरामा कुनै तथ्य नभएको बताएकी छिन् ।
उनले चर्चीत अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यम एएफपीसँग कुराकानी गर्दै शाकाहारी मानिस र कोरोना संक्रमणबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट पारिन् ।
यसैबीच भारतीय चिकित्सकले पनि यसबारे सच्चाई नभएको बताएका छन् । भारतीय मेडिकल काउन्सीलका महासचिवसमेत रहेका डाक्टर आरवी असोकनले शाकाहारी र कोरोनाबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।
उनले हालसम्म यसबारे कुनै तथ्य फेला नपरेको पनि बताएका छन् । उनले जनाएअनुसार शाकाहारी मानिसलाई पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट
जेठ १ गते, २०७७ - १४:२३ मा प्रकाशित